Ny fiavotan-tenan’ireo Kristiana vitsy an’isa lasibatry ny fanafihana ao Yemen · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Janoary 2019 8:33 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, 繁體中文, Ελληνικά, Français, русский, polski, 日本語, عربي, English
Galileo any Sana'a, Yemen. Sary nahazoana alalana.
Tsy misarika firy ny sain'ny fampitam-baovao ao Yemen ny fiavotantenan'ireo Kristiana vitsy an'isa ao amin'ny firenena mba ho tafavoaka velona eo anivon'ny fitomboan'ny fanafihana azy ireo.
Noravana ny toeram-pivavahana. Tamin'ny taona 2015, nisy ny fanafihana miisa telo tamin'ireo ivontoerana Kristiana tany amin'ny tanàndehibe atsimo misy ny seranan'i Aden, araka ny voalazan'ny Human Rights Watch .
Tamin'ny taona 2016, mbola tao Aden ihany, nalaina an-keriny ny pretra Indiana iray ary nampijaliana nandritra ny fanafihana ny fonenan'ny Misionera Mpanao Asa Soa ary nahafatesana masera miisa efatra. Nanoratra teo amin'ny rindrina ireo lehilahy nitam-piadiana, izay heverina fa miaraka amin'ny Fanjakana Islamika (ISIS), hoe: “Tsy misy Andriamanitra, afa-tsy Andriamanitra. Mohammed no mpitondra ny hafatr'Andriamanitra. Ny Fanjakana Islamika. Ozonon'Andriamanitra ny Kristianina sy ny Jiosy. “
Noho ireo toe-java-tsarotra ireo dia maro ireo Kristiana any Yemen no miafina rehefa mampihatra ny finoany .
Manakaiky ny faha-30 taonany i ‘Galileo’ (solon'anarana). Tsy nino an'Andriamanitra izy nandritra ny volana vitsivitsy talohan'ny niovany ho Kristianina telo taona lasa izay. Mihevitra izy fa mampidi-doza ny ainy isan'andro izany.
Anisan'ireo Yemenita miisa 41.000 tombanana ho Kristianina ao amin'ny firenena izy na dia mino aza izy fa ambony kokoa mirona mankany amin'ny 70.000 ny tarehimarika. Manoritsoritra ny loza atrehiny noho ny fivavahana ao anatin'ny ady misy ankehitriny izy:
Latsaky ny 1 dolara dia mety efa hamonoan'izy ireo ahy. Mety hitranga amin'ny fotoana rehetra izany. Novonoin'izy ireo ny namako; Azonao sary an-tsaina ve hoe toy inona no vonoina noho ny fivavahana? Satria milamina ? Heverinao fa mampatahotra ve izany? Tsy natahotra ireo namako. Mety ho faty aho amin'ny fotoana rehetra saingy tsy matahotra aho. Ny Tompo no harambatoko sy batery fiarovana ho ahy ary Mpamaha ny fatorako;
Henjehina noho ny finoany ireo Kristianina any Yemen. Heverina ho toy ny mpamadika amin'ny maro ny fialana amin'ny finoana Islamika ary mety ho voaheloka ho faty. Noho izany, mitazona ny finoany miafina izy ireo. Mety tsy hilaza amin'ny ray aman-dreniny mihitsy akory aza izy ireo :
Maro [Yemeni] no voatery nandositra, saingy maro no niova sy natao batisa. Mitombo ny Kristianisma ao Yemen na dia eo aza ireo loza tsy maintsy hatrehanay. Hitan'izy ireo ny marina ao amin'ny Baiboly, misy ny karazana fanadiovana ara-panahy izay tsapan'izy ireo. Ary mahatonga azy ireo hitady fiadanana ny herisetra izay atrehin'izy ireo. Nahita fiadanana tao amin'ny Baiboly izy ireo.
Ireo izay mahita ny vondrom-piarahamonina Kristiana dia mivavaka ao anaty efitrano foana ary mamafa ny resak'izy ireo anaty aterineto:
Manova ny toerana misy anay foana izahay. Tsy tianay izy ireo hahamarika ny fivorianay miafina tsy tapaka. Manonofy mivavaka any am-piangonana ny Kristianina ao Yemen. Manonofy manao rojo miaraka amin'ny hazo fijaliana ny vehivavy Kristiana. Maniry ny hanisy tombokavatsan'ny hazofijaliana eo amin'ny tratrako aho. Izany no fihetsika fanoherana izay ilain'ny fanahiko. Saingy fantatro fa famonoan-tena izany. Tsy afaka na dia ny mi-like” lahatsoratra momba ny Kristianisma ao amin'ny tambajotra sosialy aza.
Nanamafy izy fa tsy matahotra fahafatesana fa saingy matahotra ny handao vondrom-parahamoniny:
Tsy mampatahotra ahy ny fahafatesana, fa ny mandao ireo Kristianina izay mila ahy. Mila ny fanohanako izy ireo, manana iraka eto aho.
Mino i Galileo fa miteny mafy kokoa noho ny teny ny asa, ary nahatonga azy ho voasambotra tao Sana'a ny hetsika nataony, izay toerana onenany. Tamin'ny taona 2017, nanao akanjo toy ny dadabe noely izy tamin'ny Krismasy ary nizara kilalao sy sakafo ho an'ny ankizy. Nosamborin'ny Houthis izy ary nampijaliany nandritra ny andro maro.
Nanala baraka ahy izy ireo. Nidaroka ahy nandritra ny 4 andro tsy nijanona izy ireo. Rehefa nandresy lahatra azy ireo aho fa tsy Kristiana, fa nanampy ireo ankizy fotsiny dia navelany handeha aho.
Ao an-tanàndehibe misy ny seranan-tsambo any atsimon'i Aden no misy ireo tafika mpanohana ny governemanta raha mifehy ny faritany afovoany any avaratra, ao anatin'izany ny renivohitr'i Yemen, Sana'a kosa ny Houthis. Nipariaka ihany koa ny Al-Qaeda sy ny ISIS noho ny tolona amin'ny endriny maro samihafa miady fahefana ao amin'ny faritra, eo an-toerana ary iraisam-pirenena.
Na dia teo aza ny fampijaliana, tsy nanenina i Galileo. Mihevitra izy fa nanjary marefo avo roa heny ny Kristianina nandritra ny fifandonana teo amin'ireo mpikomy Houthi sy ny tafiky ny governemanta Yemenita notohanan'ny fiaraha-mitantana notarihan'ny Saodiana.
Mila fanampiana izahay, tsy fantatro hoe ahoana na hoe iza no tokony hanampy anay. Miatrika milisy izahay, fa tsy governemanta, izay mahatonga izany ho sarotra kokoa ho anay hahita vahaolana. Faly aho fa manampy ahy hanely ny feoko ianareo; Reraky ny miaina ato anaty aloka aho. Mampiseho ny hanoanan'ny Yemenita ny fampahalalam-baovao kanefa ny zavatra tena tadiavinay indrindra dia ny fahalalahana miteny, fahalalahana ara-pinoana. Natao ho an'ny vatana ny sakafo fa ho an'ny fanahy kosa ny fahafahana .
Nitolona i Galileo ny handeha any Libanona saingy ny volana Novambra 2018 izy vao nahavita izany rehefa afaka nanatanteraka ny nofiny ihany ny mba hivavahana ao am-piangonana tsy misy tahotra.
Tsy te hijanona ela tany Libanona anefa izy, satria nino izy fa mila azy ny vondrom-piarahamoniny any Yemen.
Rehefa niverina tany Sana'a izy dia nantsoin'ny Houthis, izay mifehy ny faritra. Niezaka nandositra izy ary nitady fialofana tany Al Hudaydah izay misy ny reniny. Saingy rehefa nilaza taminy momba ny finoany izy dia tsy nanaiky azy ny reniny. Tsy maintsy niverina tany Sana'a izy, izay nisamborana azy.
Nandritra ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity dia tsy azo antso i Galileo nandritra ny fotoana kelikely. Renay taminy taorian'izay fa nogadraina nandritra ny 20 andro tany am-ponja izy talohan'ny namoahana azy ny 9 Janoary 2019. Nilaza izy fa niatrika fampijaliana ara-batana sy ara-tsaina .
Miafina i Galileo amin'izao fotoana izao satria mihevitra izy fa avelan-dry zareo mivoaka izy mba ahafahan-dry zareo mahita ny vondrom-piarahamoniny. Any amin'ny Houthis ny anarany, noho izany dia sarotra ho azy ny mandositra ny faritra izay fehezin'izy ireo. Nilaza izy fa mila fanohanana ara-diplomatika sy ny fanohanan'ny vahoaka mba hivoaka an'i Yemen faran'izay haingana satria mety ho tapitra amin'ny fotoana rehetra ny ainy.